Nkpọrọgwụ: Ejiri Egwuregwu Ịntanetị Kọwaa
Ụgha Intanet bụ taa bụ otu n'ime ego nkwụsị na-arịwanye elu n'elu weebụ. Ọnụego nkena-agba ọsọ online n'ihi scams bụ na oke egwu ọnụego. United States na-edefu ihe nfufu nke ruru $ 525 nde, nkezi nke $ 1,813 kwaonye ozo dika National White Collar Crime Center. Egwuregwu Intanet na United States mere ihe ruru pasent 90 nke ngụkọtantanetị ịntanetị na ụwa - talon de paie excel. Ọ bụ ihe iyi egwu nke chọrọ nlebara anya ngwa ngwa.
Ngalaba ndị uweojii na-arụ ọrụ na cybercrimime gburugburu ụwa na-etinye ego na usoroịlụ ọgụ ịntanetị, ọ bụkwa ihe amamihe dị na ya maka ndị a na-ahụ maka ịkọ akụkọ ma ọ bụ ụdị ụdị aghụghọ ọ bụla na-eme online. Otú ọ dị,ndị ọrụ ịntanetị nwere ike ịnọgide na-amụ anya site n'ịgụ ihe ndị dị na ịntanetị dị ka Nche Nche blog n'etiti ihe ndị ọzọ. Enwereọtụtụ nchịkọta akụkọ banyere ntanetị ịntanetị na Federal Trade Commission (FTC) dịka otu n'ime òtù ndị a tụkwasịrị obimaka ọrụ ahụ.
Nzọụkwụ ndị na-esote iji kọsaa ịntanetị dị na ntanetị, ma nke mbụ bụ ebe aụzọ ụfọdụ, site na ọkachamara ọkachamara Ọcha ,Jason Adler, nke ndị fraudsters jiri online.
E nwere ọtụtụ mgbasa ozi n'ịntanetị na-arata ndị mmadụ iji sonyere otu. Businessndi na - ejide akwukwo ntaneti na - achikota ego buru ibu site n'inye aka na ime obere oru n 'oru ma choro ibinye na izigaego maka otu, ọzụzụ, ụgwọ ma ọ bụ nnweta na ihe. N'ikpeazụ, ọ na-eme ka ọ bụrụ ihe nro. Kpachara anya.
N'afọ 2004, e debere izu ohi na mkpesa kachasị ahịa na UnitedMba. Ihe ize ndụ nke ịntanetị a dị oke njọ nke na ọ nwere ike iduga ego niile na ego ụlọ akụ. Na nke aikpe, ndị omempụ na-agbanwe àgwà ha iji nweta ego akwụmụgwọ ahụ. Ndị e merụrụ ahụ kwesịrị ịkọ ọkwa ha, ụlọ ọrụ akwụmụgwọ ma ọ bụkọọrọ ndị uweojii ozugbo.
Ozi gbasara onwe onye dị ka ịkwọ ụgbọala na paspọtụ nke ụlọ ọgwụ,ụlọ akụ, na òtù gọọmentị nwere ike ịnweta ọtụtụ ndị omekome ma mee ka ndị mmadụ mara na ịntanetị. Ozi ahụ ruru onlinendị na-eme ihe ọjọọ na ndị na-eme enyi. A ghaghị ịmara netwọk Intanet nke na-agụnye hacking data ka ịchọta ngwa engines dịka Google, Yahoo,na Bing maka iwepu.
Ụgha Intanet nwere ike ịbụ ụdị email na-arịọ maka enyemaka ego. Nafraudsters mbanye anataghị ikike na akaụntụ email nke enyi enyi ma rịọ maka enyemaka ego site n'aka Western Union. Enwere ọtụtụ ndụmọdụ naPCMag iji zere ụdị ụdị ịntanetị.
Egwuregwu Intanet pụrụ ịbịa n'ụdị nke efu. A makwaara dị ka nkwụsị,Mkparịta ụka enyi na-agụnye onye na-ekwu na ya hụrụ onye ahụ aka. Onye omekome ahụ na-agba onye ahụ ahụhụ ka o zigara ha ego maka njem ma ọ bụ ọgwụmmefu. Ejila onyinye nye ndi gi amaghi.
Ndị ọrụ ahia na ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Nkwekọrịta Ndị Na-ahụ Maka Nchebe Ndị Na-ahụ Maka Ndị Na-ahụ Maka Ihe Nile nwere usoronke na-eleba anya na ịntanetị nke na-agụnye nkwụnye ụgwọ nke ndị na-eweta ịntanetị ndị na-adịghị enweta ngwaahịa. Ọ bụrụ na ịntanetị agaghị eruonye na-azụ ihe, onye chọrọ ịkọ akụkọ ahụ maka enyemaka.
Ụgha Egwuregwu Ịntanetị
Spam nwere ike ịkpata ojoro. Gaa Kọmitii Nchekwa na Exchange Commissionmgbe ị na-ada onye na-agba afa na-agbapụ.